Banyere Anyị - Gaofuheng Electric Technology Co., Ltd
plastic Herọd na metal nnukwu ogige
plastic injection ebu & igba ebu
Shenzhen Gaofuheng Electric Technology Co., Ltd. bụ One-akwụsị n'ụwa nile Electronic Manufacturing Ọrụ na-eweta na OEM & ODM ụdị ekpuchi PCB echepụta, akụkụ ị nweta, mgbakọ, mmemme, ọrụ ule, plastic ebu ogwu ogbugba, nkwakọ ngwaahịa na lọjistik ebe 2008.
Anyị ngwaahịa ahụmahụ nso agụnye home ngwa oru, n'ji ngwá electronic, ulo oru akara, ọkụ mkpu usoro, kichin ngwa oru, ọgwụ ngwá, ụgbọ ala audio usoro, Mgbakọ na Telecommunication, wdg
Anyị nwere 8 zuru nzukọ edoghi, gụnyere SMT igwe si ajụ ọsọ na elu na-agba nke Juki Ụdị, Duru-free wavesoldering igwe na reflow igwe, akpaka solder tapawa ebi, X-ray soja na BGA rework ọdụ, ICT testers, AOI ngwá, ahaziri FCT testing fixtures nakwa na anyị dị testing lab nile di iche iche nke kwụsie ike na ntụkwasị obi ule.
Anyị kweere na àgwà na ọrụ, nke bụ mkpa ga-emeri ahịa. Anyị mgbe a raara iji melite àgwà na ọrụ site na nkwalite nke anyị ụlọ ọrụ nakwa dị ka ahịa ahụmahụ na nzaghachi. Anyị ahịa otu bụkwa amamiihe na ọkachamara nkà nke nkwurịta okwu ma na ngwa ngwa gị ase.
Anyị ga-achọ ka ike a mmeri-mmeri imekọ ọnụ na ị. Biko kpọtụrụ anyị taa.
magburu onwe ya mma
The ụlọ ọrụ specializes na-amị elu-arụmọrụ ngwá, ike oru ike, ike mmepe ike, ezi oru ọrụ.